Waa kee xiddigii ka tirsanaa AC Milan ee uu Gattuso ugu hanjabay inuu ilkaha ka jabin doono, maxaase ka xanaajiyay ma naxaha reer Talyaani? – Gool FM
Haaruun January 25, 2020
(Yurub) 25 Jan 2020. Waa jirta sheeko yaab leh oo dhex martay xiddig ka tirsanaa Kooxda AC Milan iyo xanaaqlowga reer Talyaani ee Gattuso, iyadoo uu Gattuso ugui hanjabay inuu laacibkaas ilkaha ka jabin doono.
Kumaa ahaa xiddiga xilligaas ka tirsanaa AC Milan ee uu Gattuso ugu hanjabay inuu ilkaha ka jabin doono, maxaa ka xanaajiyay ninka carada badan ee reer Talyaani, maxaase dhacay maalinkaa?.
Waxa uu ninka carada u saaxiibka ah ee ka soo jeeda Waddanka Talyaaniga uu inta badan soo bandhigaa dhacdooyin layaab leh oo ay ugu horreyso muujinta caradiisa isaga oo aan qarsanin ficil ahaan.
Waxa aynu muuqaalkaan idin kugu soo gudbinaynaa sababta uu Gatusso ugu hanjabay xiddig ka tirsan kooxda ay AC Milan waqtigii uu macalinka ahaa kooxda AC Milan, maxaase keenay inuu Ninka reer Talyaani u hanjabo xiddigaasi.
Sheekada wixii dhacay maalintaas ka daawo muuqaalka hoose:-